Idatha yeFit esekwe kuphando oluchanekileyo- iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Lungisa idatha ngokusekelwe kwiseshoni echanekileyo
AutoCAD-AutoDeskcadastreGPS / Izixhobo
Lo ngumzekelo weengxaki eziqhelekileyo, okwenzekayo kum ngoku. Ndinovavanyo olwenziwe ngaphambili ngendlela echanekileyo, mhlawumbi nge-GPS, iteyiphu kunye nekhampasi. Inqaku kukuba xa sihlanganisa isikhululo esipheleleyo siyaqonda ukuba ulwazi luthatha i-deformation.
Umbango kukuba ukuba uthabatha kuphela umlinganiselo wee-vertices zangaphandle, ulungiso lwangaphakathi lubuqili.
Makhe sibone indlela yokwenza ngayo nge-AutoCAD Civil 3D:
Elula, kukhethwe Imephu> izixhobo> iphepha lerabha
Emva koko, inkqubo icela ukuba amanqaku ashukunyiswe kunye neendawo zolawulo zibonisiwe. Umyalelo yindawo yokuqala esaziyo ukuba ayilunganga (iphuzu lesiseko), ngoko ke kufuneka kuhambisane (ngongoma).
Xa zonke zibonisiwe, zenziwe ukungena. Emva koko iprogram icela izinto esiyithemba ukuzilungisa, yonke imida yeepropati ikhethiweyo kwaye Ingeniso yenziwe kwakhona.
Apha kule ngxenye apho ndikhumbula khona i-Microstation, ngenxa yokuba ndiyakucima okanye uvule amanqanaba ngaphandle kokuyeka umyalelo osebenzayo. Apha akunakwenzeka, amanqanaba endifuni ukukhetha kwifestile kufuneka avaliwe.
Kwaye unayo: Indawo zokujonga ezingcono, ngcono. Kwaye ke, kufuneka kubekho iindawo kwiindawo ezihleliyo, ukuze ucoceko lwe-topological lugcinwe.
Kucacile ukuba ngomsebenzi omkhulu akukhuthazwa ukuba uwenze ngesibetho esinye, kodwa ukwenze ngebhlokhi. Jonga ukuba icandelo elisezantsi leepropathi 4 kunye no-5, ngenxa yokuba ivertex ingakhange ithathwe, inqaku alizange lihambe, oko kuthetha ukuba imigca kufuneka ithathwe okanye iguqulwe ngesandla ukuba kungabikho khefu.
Esi sixhobo sijongeka sisebenza kakhulu, ngaphezulu koko kwenziwe yiMicrostation okoko izixhobo> izikhonkwane ze-warp.
abantu ba hi
apho inxalenye yombutho 2013 yomthetho ngumyalelo okhankanywe ngasentla ???
Imephu> izixhobo> iphepha lerabha
Ndikhangele kwindawo yoCwangciso noHlahlelo ... kodwa andiyifumani